ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင် (၅)ဆိုင် | The Restaurant Guides for Myanmar
ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင် (၅)ဆိုင်
စားဖို့သောက်ဖို့ဆို ဘယ်လောက်ကုန်ကုန် ကုန်ပါစေဆိုတဲ့ သူတွေရှိကြလား?? ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပြောပြသွားမယ့် ဆိုင် (၅) ဆိုင်ကို သွားရောက် မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဒီစားသောက်ဆိုင်က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရေအောက်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ မော်ဒိုက်မှာရှိတဲ့ Rangali Island မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာဆိုရင် တစ်ယောက်ကို ကန်ဒေါ်လာ (၃၂၀) လောက်ကျသင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် India သမုဒ္ဒရာရဲ့ (၅) မီတာအနက်အောက်မှာရှိတဲ့ သန္တာကျောက်တန်းတွေကြားမှာ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို စားသောက်ခွင့်ရမှာပါ။
Menu မှာဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာ့အကောင်းဆံး ဝိုင်တွေ ၊ဥရောပ ဟန်ပန်အပြည့်နဲ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို အီတလီစားဖိုမှုးကိုယ်တိုင်က ပြင်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။
Guys-Savoy - Paris France
ဒီဆိုင်ကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့မှာ ရှိပါတယ်။ မတူညီတဲ့ Menu ပေါင်း (၁၃) ခုကို မြည်းစမ်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကို ကန်ဒေါ်လာ (၆၂၆) ကျသင့်မှာပါ။ ဒီထဲမှာ သောက်စရာတွေတော့ ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။Menu ထဲမှာကျောက်ပုစွန်၊ သမုဒ္ဒရာရဲ့ မီတာ (၃၆၀) လောက်နက်တဲ့ နေရာမှာပဲရှိတဲ့ john dory ငါး၊ ကမာကောင် ၊ ကာဗီယားငါးဥအစရှိတဲ့ ရှားပါး စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်က စာဖိုမှုးတွေကို နာမည်ကျော် Gordon Ramsey ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးထားတာမို့လို့ သင့်ကို စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ။
Masa - New York ,United State
ဒီဆိုင်ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောခ့်မှာ တည်ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်ကို ကန်ဒေါ်လာ (၅၉၅) ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အခွန်နဲ့ သောက်စရာ၊စားစရာအပြီးအစီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Menu ရယ်လို့မရှိပဲ နေ့တိုင်းမှာ အလတ်ဆတ်ဆုံး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ချက်ပြုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပေးရတဲ့စျေးနဲ့မတန်ဘူး ဆိုကြပေမယ့် ဒီဆိုင်ကဆူရှီက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဆူရှီလို့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။
UltraViolet - Shanghai China
ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးနဲ့ အထက်တန်းလွှာထဲက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ယောက်ကို ကန်ဒေါ်လာ (၅၇၀)ကနေ (၉၀၀) လောက်ထိကျသင့်မှာပါ။တစ်ခြားဆိုင်တွေနဲ့ မတူပဲထူးခြားတာက စားပွဲတစ်ခုထဲမှာ လူ(၁၀)ယောက်ကိုပဲ တည်ခင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး အနောက်က မြင်ကွင်းနဲ့ သီချင်းသံတွေကလည်း ပြောင်းလဲနေမှာပါ။
ဒီဆိုင်ကတော့ စျေးအကြီးဆုံး စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး စပိန်နိုင်ငံမှာ တည်ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်ကို ကန်ဒေါ်လာ( ၂,၃၈၀) ကျသင့်မှာပါ။ဟုတ်ပါတယ် မျက်စိမမှားပါဘူး ဒေါ်လာ (၂,၃၈၀)ပါ။ ဒီဆိုင်ကဘာလို့ ဒီလောက်စျေးကြီးနေရတာလဲဆိုတော့ တစ်နှစ်မှာ ဖွင့်တဲ့အချိန်က တအားနည်းပါတယ်။ ဇွန်လကနေ စက်တင်ဘာလထိ (၄)လပဲ တစ်နစ်မှာဖွင့်တာပါ။ ဟင်းပွဲပေါင်း (၂၀) ကို (၃)နာရီကြာ မြည်းစမ်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး အနောက်က ပုံရိပ်ယောင်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါသေးတယ်။
Read 555 times.
ငွေသားနဲ့ ရှင်းစရာမလိုတဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးက Bars & Restaurants များ